डाक्टर बन्न छोडेर हिमाल खोज्दै हिँडे आङछिरिङ – आफ्नो समाचार
Afno News — ३० असार २०७५, शनिबार १७:४८0comment
रासस/३० असार, काठमाडौ । मेरा बुबाले मलाई डाक्टर बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर मनले मान्दै मानेन । डाक्टर पढ्न भारत पनि पुगेको थिएँ । हिमालको काखमा बसेको मान्छे परें । भारतको गर्मी सहनै सकिनँ, फर्केर आएँ । मलाई मेरै हिमालसँगको माया थियो, चिसो मौसम नै प्रिय थियो । पर्यटकको सेवा नै मेरो पुर्खाले सिकाएको कर्म थियो । मलाई डाक्टर बन्नु थिएन । शेर्पाको छोरो हिमाल नै चढ्छ, चढाउँछ । यो भनाइ हो, आङछिरिङ शेर्पाको ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मान्छे न्यून उचाइमा जाँदा समस्या भयो । निकै बिरामी परे
। रोगी डाक्टर हुनुभन्दा स्वस्थ मान्छे बनेर बस्नु राम्रो हुन्छ भन्ने त्यहाँका प्रोफेसरको सुझाव मानेर उनी स्वदेश फर्किए । फर्केर आएपछि उनी भिनाजु दावा नोर्बु शेपाको साथले पर्यटन व्यवसायमा जोडिए । “नयाँ मान्छे भेटिने, मिठो खान र लाउन पाइने भएकाले मलाई त्यसैले पो तान्यो कि ?,” शेर्पाले भने ।
यो स्मरण धेरै पछि मात्रै बुबाको मुखबाट उनले सुने। पढ्न लेख्न जान्ने भएकाले आङछिरिङको जिम्मा बुबालाई सघाउने थियो । “कुन भारी कहाँ के अवस्थामा छन् लेखाजोखा गरेर बुबालाई सघाउँथें,” उनले भने – “त्यतिखेर शेर्पा भरियाले दैनिक रु ३ ज्याला पाउँथे । अहिले दैनिक करिब रु एक हजार ८०० देखि दुई हजारसम्म पाउँछन् ।”
सन् १९६६ मा जापानी टोली ल्होत्से स्याड हिमाल चढ्न आएको थियो । उक्त टीमका एक डाक्टर खुम्जुङ आएपछि पथप्रदर्शकको जिम्मा पाए उनले ।
उनले भने – “त्यतिखेर इम्जा ताल सानो पोखरीजस्तो थियो । त्यही हिमनदीमाथि नै हामीले क्याम्प बनाएका थियौं । तर सन् २०१४ मा जापानको कियो विश्वविद्यालयको एक समूहले पुनः इम्जा तालको अध्ययन गर्यो । सो अध्ययनले तालको लम्बाइ तीन किलोमिटर र चौडाइ १४२ मिटर गहिरो भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यो जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।”
जिन्दगीको पहिलो कमाइको राम्रैसँग सम्झना छ उनलाई । “पहिलो पटक ‘ल्होत्से स्याड’को आधार शिविरसम्म गएर रु १२५ कमाएँ, त्यो मेरो पहिलो कमाइ थियो” उनले भने – “मेरो ज्याला रु ७० मात्रै भएपनि पाहुनाले बक्सिस दिएका थिए ।”
पहिलो कमाइ कसलाई दिनुभयो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने – “कसलाई दिनु नि ! आमालाई दिएँ ।” आमाले रु १० पकेट खर्च भनेर दिनुभयो । त्यतिबेला जापानी लिभाइस पाइन्टको राम्रै फेसन चलेको र जापानीहरुले ल्याइदिने गरेको स्मरण पनि उनले सुनाए ।
गाउँघरका सबै शेर्पा दाजुभाइ आरोहणमा निस्कन्थे । अंग्रेजी जानेको मान्छेको माग बढी हुन्थ्यो । उनलाई विदेशीसँगै गएर हिमाल अध्ययन गर्ने राम्रै मौका मिल्यो । त्यसले उनलाई विज्ञकै रुपमा स्थापित गरिदियो । प्रत्यक्ष रुपमै हिमालको अध्ययन गर्न पाएको मौकाले नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै हिमाल तस्वीर हेरेरै चिन्न र र वर्णन गर्नसक्ने भए उनी । उनी भन्छन् – “धेरै त होइन नेपालका ९० प्रतिशत हिमालको जानकारी दिनसक्छु भन्ने लाग्छ मलाई ।”
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कृपाशुर शेर्पाले संघले व्यवस्थापन गर्र्दै आएको हिमाल मन्त्रालय मातहत ल्याउने प्रयास गरे । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला संघकै पक्षमा आयो ।
चौधवटा हिमालमध्ये कञ्चनजंघा यलुङखा वेस्ट बाहेक बाँकी सबै १३ वटा हिमालको आरोहण भइसकेको शेर्पा दावी गर्छन् । उनकाअनुसार ती १४ चुचुरामा कञ्चनजंघा साउथ (८,४७६), कञ्चनजंघा सेन्टर (८,४७३), कञ्चनजंघा मुख्य (८,५८६) कञ्जनजंघा यलुङखा (८,५०५), यलुङखा वेस्ट (८,०७७), मकालु (८,४८५), ल्होत्से स्याड (८,३८८), ल्होत्से मिडल (८,४१०), ल्होत्से मुख्य (८,५१६), सगरमाथा (८,८४८), चोयु (८,१८८), मनास्लु (८,१६३), अन्नपूर्ण (८,०९१) र धौलागिरी (८,१६७) रहेका छन् ।
सन् १९८२ मा एसियन ट्रेक नामक कम्पनी स्थापना गरेयता अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढीलाई सगरमाथा आरोहण नै गराइसकेको तथ्याँक छ शेर्पासँग । यस वर्षको वसन्त ऋतुमा मात्रै ७६ जनाले सगरमाथा आरोहण गरे । सन् १९७५ मा शेर्पाकै संयोजनमा पहिलो पटक ब्रिटिस आरोहण दललाई पठाइएको थियो । सन् १९८३ मा आफ्नै कम्पनीबाट सगरमाथामा अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त आरोहण समूह पठाउन थालेको शेर्पा बताउँछन् ।
पर्यटनमा परेको वातावरणीय प्रभावलाई सुधार गर्न केही गर्न पाए हुन्छ भन्ने सोच राख्छन् उनी । नेपालको पर्वतारोहणलाई बाहिरी विश्वसामु चिनाउने व्यक्तिको नाम लिँदा उनी आङरिता शेर्पा (हिमचितुवा), स्व आक्पा शेर्पा र दावा नोर्गु शेपाको नाम स्मरण गर्छन् र स्व डा हर्क गुरुङ र ब्रिटिस नागरिक माइक चेनीलाई उनी आफ्नो प्रेरणाका स्रोत मान्छन् ।
पेचिलो बन्दैछ प्रदेश १ को नाम र राजधानी, सत्तारुढ नेकपामै विवाद
वि.सं. २०७५ माघ २० गते आइतबारको राशिफल